अरपे मुक्त स्वतन्त्रता - Ek Jamarko
Home / मनोरन्जन / अरपे मुक्त स्वतन्त्रता
अरपे मुक्त स्वतन्त्रता
Jamarko TV मनोरन्जन
~यो लगनमा अरपे लाउरे संग ब्या अर्ने सुर कसेका तरुणी हरु एवं अगील्लो लगनमै डोरी लाउरे संग लगनगाँठो कसीसकेका नवविवाहिता हरुलाई घरमा परेको अफ्ट्यारो र वुहार्तनादीका समस्या हरु जस्तै घरमा सासु ससुरा को सेवा गरेर आजित हुनुभएको अथवा जेठाजु जेठानीका छोराछोरी को चाकडी गर्दा गर्दा आफ्नो विजोक भएको ठान्नुभएको छ भने आज उपरान्त त्यस्ता घरायसी वुहार्तन बाट मुक्ति दिलाउदै स्वतन्त्रता उन्मुख जिवन जिउने कला सिकाउने हेतु निम्न लिखीत टिप्स हरु सुझाईन्छ..!
~यदि तपाई नव विवाहिता हुनुहुन्छ र बच्चा भएका छैनन भने अरपे ले पठाईदेको आईफोनको ब्राईटनेस १०० सम्मै खोल्नुस र ३० मिनेट फेसबुक हेर्नुस।त्यसरी उजेलो मुबायलमा ३० मिनेट हेरीसकेपछी तपाईका आँखा बाट आँसु र नाक बाट सिंगान बग्न थाल्नेछ, अनी विस्तरामा पुठो फर्काएर सुत्नुस र मेरो कपाल दुखो जोरो आयो भन्दिनुस । तपाई लाई अरु काम गराउन र विमारी होईन भनेर भन्न ईन्द्रे का बाउ चन्द्रे ले पनि सक्दैन । सासु को कुरै छोड्नुस।
~ माथीको आईड्या ले हप्तामा दुई तिन दिन मात्र काम बाट छुटकारा पाउन सकीन्च! यदि तपाईलाई परमानेन्ट छुटकारा चाहिएको हो भने यो पटक अरपे आउदा जसरी पनि दुई जिउ की हुनुस । खादै आएको ट्याब्लेट बन्द अर्नुस संगीनी सुई लाउने अर्नुभाच भने रोक्नुस र 'एनी हाउ बच्चो बनाउ' भन्ने सोच्नुस । दुई जिउकी भएसी अस्पताल जान पर्च यहा बाट म सक्तिन कान्छु मलाई बजारमा डेरा खोजेर राख्देउ भनेर फकाउनुस अरपे लाई फकाउ २-४ दिन लाग्छ । बजार मा डेर नसरेसम्म ठुस्केको ठुस्केई गर्नुस ।
~ अरपे बसुन्जेल को तिन महिना यसै जान्च । अरपे गा'पछीको नौ महिना तपाई गर्भष्ट्याई भा'पसी अस्पताल गईरहन परो मईनै पिच्छे । तपाई गाँउ तिर जानै परेन । बजार बाट मन लाग्दा माईती तिर जानुस । सकेसम्म बैनी या भाई लाई पनि त्यै बोलाएर संगै राख्नुस र नजिक को कलेज भर्ना गर्दिनुस। देवर र नन्द हरु छन भने पनि नजीक पर्न नदिनुस । हप्तामा एक पटक माईत र महिना मा अक पटक अस्पताल जानुस नौ महिना यसै जान्च । पुरा १२ महिना वित्ने छ । अव तपाई सुत्केरी हुँदा अरपे आउन काटीकुटी एक वर्ष बाकी रहनेछ ।
~ वच्चो जन्मेपछी न्वारन गरेर माईत जानुस छ सात महिना सुत्केरी बस्नुस बा आमाले ख्याल गरिहाल्छन। माईतमा भाउजु बुहारी छैनन अथवा दाई विदेश र भाई सानै छ भने झन सुनमा सुगन्ध भयो तपाई त्यो एक वर्ष पुरै सुत्केरी बनेर माईत बस्न सक्नुहुन्छ। महिनामा एक पटक बच्चालाई सुई लगाउन बजार लैजादा आफ्नो डेरा बढार बुढुर पार्नुस । नत्र मुसाले काटेर अरपे ले पठाका कोरियन कम्वल कामै नलाग्नी बनाईदेला । पछी काम लाग्छ ध्यान दिनुस ।
~नाती हेर्न रहर लाग्यो भनेर सासु ससुराले साह्रै कर गरे भने टुच्च एकदिनको लागी गईदिनुहोला र घर पुगेपछी बाबु लाई सुई लाउन आको डाक्टर ४ बजे मात्र आउछ अरे भन्नुस र ३ बजे तिर घर बाट निस्कनुस ४ बजे सुई लगाएपछी माईत गए पनि भयो त्यही अरपे ले खोजेको डेरामा बसे पनि भयो तपाई माथी कोही कसैले औंला उठाउन सक्तैन । बच्चो तपाईको चरित्र सफा पार्नी लाईसेन्स हो । आवस्यक ठाममा प्रयोग गर्न नहिच्कीचाम्नुस।
~ यती गर्दागर्दै अर्को वर्षदिन यसै जान्छ। बच्चोको सुईको डोज सकीन्छ अनी हजुरलाई अरपेको तलतल लाग्न सक्छ । अरपे घरबाट गएको पनि दुईवर्ष हुन लाग्यो अव फोन मा कुरा हुदा बच्चोको चिचीलो बोली सुनाईदिनुस। ब्बबा मम्मा भनेर बच्चोले निकालेको आवाज सुनेपछी अरपेको मन बटारिन्च । डोरीले गुण्टा कसेर केटो आईपुग्छ दुईचार दिनमा । सकेसम्म एयरपोर्ट लिन जानुस तपाई नसके भाईलाई पठाउनुस तर याद राख्नुस डोरी लाउरे सिधै तपाईको घरमा कदापी जान नपाउस । अरव बाट आएको पोकाको डोरी खोल्ने अधिकार तपाई बाहेक अरु कसैलाई छैन ।
~ पोको खुलेपछी मन भरी लाउरे लाई हेर्नुस , यत्रो टेम पछी भेटेको तपाईको निजी अरुे संग घुलमील हुनुस , बच्चो काखमा लिएर घर जाम भन्ला लाटा ले तर पहिला माईत लिएर जानुस । घर भनेको पछीको कुरा हो विस्तारै गए भैहाल्छ। माईतमा दुई तिन दिन बसेर फेरी डेरामा आउनुस अनी मिले कतै घुम्न जानुस नमिले एक पटकलाई टुच्च घर गैदिनुस अरपेको पनि मन राख्दिन पर्च । तर याद गर्नुस बच्चो भुईमा राख्दा रोला ओर्ला सासुको काखमा पनि त्यती नदिनुस आफै समाई राख्नुस । बढी रोयो भने बाबा केटो विमारी छ । अस्पतालमा डाक्टर ले भोली लाई बोलाको हो भनेर सके आजै नभए भोली विहान सम्म त्यो घर बाट जसरी पनि निस्कने प्लान बनाउनुस।
~ अरपे आको वेलामा धेरै कुराको मौका छोप्नु पर्छ। मुख्य कुरा फेरी गर्भवती भईएला त्यता तिर ध्यान दिनुस। सुई लगाउनुस दवाई खानुस जसरी हुन्च गर्भ रोक्नुस रेकिएन र गर्भ बसीनै हाल्यो भनेपनि टेन्सन नलिनु र यो कुरो अरपे लाई नसुनाउनुस १२/१८ हप्ता को क्युरेट गर्न पाईन्च। अरपे फर्केसी गर्न पनि पाईन्छ । बरु अंशवण्डा को कुरा भने उठाईहाल्नुस । जति पर्च जे पर्च समाईहाल्ने । त्यो घरबाट निस्कीहाल्ने योजना बनाउनुस। अरपे ले भाईबैनी लाई खुसुक्क पठाको पैसाको हिसाप माग्नुस र ठस्कनुस । आफ्नो वच्चाको भविष्यको विकराल रुप देखाउदै भाईबैनी लाई सुकी नपठाउन नसिहत दिनुस। बरु १/२ दिन कन्नो फर्काएर सुत्नुस । जान्नुहुन्च भने सुक्क सुक्क पनि गर्नुस । अरपे ले अंश लिएपछी तपाईको त्यो घर संगको नाता सँधैंको लागी सकीयो । दशैमा टिका थाप्न गए जानुस नगए नजानुस तपाईको स्वतन्त्र जिवनले अर्को खुट्कीलो पार गर्यो ।
~ यतिन्जेलमा दुई महिना पार हुन्छ । अरपेको फर्कनी बेला पनि हुन्छ । उसलाई बडो गह्रौं मन लिएर विदा गर्नुस। एयरपोर्ट छोड्न जानुस । १४ /१५ महिनाको बच्चो अव आमा संग छोडेर हिडेपनि हुन्छ। हजुरको ज्यान पनि तंग्रीईसकेको हुन्छ चिन्ता नगर्नुस । अरपे गएपछी पनि सधैं माईतमा बस्न हुदैन अव डेरा तिरै रत्तिन कोसीस गर्नुस । गाउमा ससुराले अरपे लाई दिएको अंश अधियामा लगाउनुस या ठेक्कामा दिनुस ।
~यदि तपाईले डेरा तराई तिर लिनुभएको हो भने अव तपाईका दश नंग्रा खियाउने समय गए । अरपे ले उता हाड घोट्छ यता तपाई मासु घोट्नुस। दश नंग्रा खियाउने तपाईले होईन अव । सम्पत्ती तपाईको हो तपाईको पहाडमा अरुले नै दश नंग्रा खियाउछन बस तपाई सुतेर खानुस । बरु गैह्रीखेत ठेक्कामा लगाउनुस र भएको आम्दानी ले छिटै घडेरी किन्नुस ।
~ कतै घुम्न जान मन भए माईक्रो का ड्राईभर दाईको नंबर राखीराख्नुस । आडैको सिटमा राखेर प्रेम पुर्वक पुर्याउनेछन । तपाई माईतमा बच्चो छोड्दै हिड्दै गरेको कसैले थाह पाए र सासु ससुरा लाई भन्दियो भने उनीहरुले सोझै अरपे लाई फोन गरेर भन्दिनेछन । बरु आफै निहु खोज्नुस एकपटक । अरपे लाई फोन गरेर तिम्रा बा आमाले मेरा कुरा काट्छन मलाई रन्नी छडुली सम्म भनेचन पल्लारे रिते संग अस्ती बाबुलाई जचाउन जादा भनेकी भनेर अरपे संग सुक्क सुक्क गर्नुस । त्यती सुनेसी अरपे रिसले आगो भएर बा आमालाई थर्काम्च अनी त्यो घर संग अरपे ले पुर्णतया नाता तोडेपछी तपाईको जिन्दगी पुर्ण स्वतन्त्र भएको घोषणा अरिनेछ ।
~ तर हजुरले यो भन्दा पनि एड्भान्स टाईपको स्वतन्त्रता खोज्नुभको हो भने अर्को चरण पार गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यो चरण लाई अली गम्भीरता पुर्वक पढ्नुहोला ! पैसाको मामलामा गंभीर बन्नुहोला । अव अरपेले पैसो पठाम्छ तपाईको हातमा तपाईको मनले अरु स्वतन्त्र हुन खोजेको हो भने अर्को यौटा हेन्सम टाईपको केटा खोज्नुस । सकेसम्म यौटा बाइक किन्दिनुस । नसके तेल सम्म भय पनि राख्दिनुस । छोरो बोर्डिङ या माइतमा हुन्छ केटा सङ्ग घुम्न जानुस । अरपे लाई खर्च बढयो बाबा भन्नुस । बाबु पनि थपियो भनी ओभर टाइम काम गर्न भन्नस । बिचरा अरपे लाई फोन गर्ने सम्म फुर्सद हुदैन । अब फोन गरेर डिस्ट्रब पनि गर्दैन । ऋण खोजखाज गरेर घर बनाउछु बाबा पैसा पुगेन भन्नस । ऋण खोजेर पैसा पठाउछ अरपे ले तीन चार लाख जम्मा भएपछी त्यो पैसा गहना लिएर भाग्नुस । पैसा छउन्जेल मोज गर्नुस । पैसा सकेसी हेन्सम केटाले पनि छोडछ न घर न माइत भैन्छ । अनि मन्दिर मा गएर रुमाल बिच्छाएर बस्नु झन काम नगरी माम हुन्छ । हजुरको स्वतन्त्रता को यो चरण लाई 'अरपेनिर्वाण' या महा डोरीलाउरे मुक्त जिन्नकी घोषणा अरिनेछ ।
~ धन्यवाद, कसैको निजी जिवन संग मेल खाएमा संयोग मात्र हुनेछ !
~ दुर्गा पंगेनी !
अरपे मुक्त स्वतन्त्रता Reviewed by Jamarko TV on जून 27, 2016 Rating: 5
नयाँ लोक दोहोरी गीत ‘पुतली’ सार्वजानीक
एनआरएन कतारमा युवाहरुको आकर्षण बढ्दो –माया केसी र पदम गिरी बीच महासचिपमा भिडन्त